Woopra ee iPad-ka waa kan - Geofumadas
Nofeembar, 2011 Internet iyo Blogs
Woopra waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagula soconayo taraafikada barta tooska ah. Waqti ka hor Dib ayaan u eegay ee codsigii desktop, marka lagu daro waxaa jira version Google Chrome oo hadda uun ayaa la cusbooneysiiyey oo kaliya oo ku yaalla iPhone, oo ah 2.0 qaab cajiib ah oo ku habboon iPad-ka.
Naqshadeynta ayaa wali taagan, sidii qaabkii hore ahaa, inkasta oo marin yar la helayo oo kuu oggolaaneysa inaad dhex maraan adigoon socon / imaan. Hadda waxay u oggolaaneysaa ogeysiisyada waxaadna yeelan kartaa dhowr bog oo firfircoon isla waqti isku mid ah oo keliya waxaad sugeysaa digniino gaar ah sida:
Marka uu isticmaleysto dal gaar ah, halkaas oo aan leenahay olole gaar ah.
Marka user ah oo ku yaala goobta ku soo noqotey in ka badan saacadaha 50.
Markuu isticmaale u yimaado erayga «AutoCAD 2012»
Marka goobta ay gaadho wax ka badan 20 marxalado isku dhafan
Markuu qofku la xidhiidho Geofumadas isagoo kugula hadlaya (Hadda taageeraya sheekaysiga)
Guddiga weyni wuxuu u qaybsan yahay qaybaha 6, oo la mid ah codsiga macaamilka ee xakamaynta taliska:
Jaantuska tirada booqdayaasha waxaa jira waqtigan, kiiskan waxaa ku jira 15
Boqolkiiba inta u dhexeysa soo-booqashada cusub iyo soo noqoshada soo noqnoqda, xaaladdan 3 ee 12 horay ugu soo dhoofnay Geofumadas
Jaantuska booqashooyinka saacaddiiba, oo ka soocaya martida iyo aragtida bogga. Sidaad u aragto, 3 galabnimo waqtiga Mexico, 1,669 booqasho iyo wadar ah 3,929 ficil ayaa yimid.
Heerkulbeegga nooc ka mid ah ayaa ka soocaya kuwa ku soo qora bogga, kuwa kaliya ee akhriya iyo kuwa ku sii fekeraya qodobka labaad ee 37.5.
Ilaha ugu muhiimsan ee booqashooyinka
Midabada martida sida ku xusan xarafka gaarka ah. Waxaan u isticmaalaa jaalle dadka imanaya marka ugu horeysa, midabka liinta kuwa aan booqan goobta 5 jeer, bunni ah 5-10, cagaar 10-25, iyo casaan ka badan 25 booqasho. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan fahanno wareegyada toddobaadlaha ah qaarkood, saameynta dib-u-celinta ama gaarista boostada dhowaan la soo raray.
Gudaha kale waa nooca ereyada muhiimka ah ee kuwa ka imaanaya matoorada raadinta
Iyo guddiga ugu dambeeyay waddanka leh martida ugu badan ayaa lagu muujiyay, gudaha waa faahfaahinta martida ee dalka.
Mid kasta oo ka mid ah baararka ayaa marin u ah faahfaahin dheeraad ah, tusaale ahaan, haddii liiska soo-booqdayaasha la xusho, waxaad arki kartaa dhammaan kuwa hadda jira oo leh soo koobitaanno aasaasi ah laakiin markii aad dooraneyso waxaad arki kartaa faahfaahin sida kan hoose ka muuqda: Booqdaha 149,699 wuxuu isku xiraa Panama, waxay isticmaashaa Internet Explorer iyadoo leh Windows Vista, waxay soo gaadhay goobta 9 jeer, waxay aragtay 69 bog oo wadar ah, waxay samaysay 69 ficil qiyaas ahaan wakhtiga isku xidhka ee ah laba saacadood tan iyo booqashadiisii ​​ugu horaysay, oo ahayd 34 maalmood ka hor.
Of ugu wanaagsan, taariikhda martida, in kaliya laga arki karaa codsiga for iPad, sidoo kale baaritaanno filimka ayaa aad u sahlan.
Xogta noocan ah badanaa waxtar ayey u leedahay bogagga, maxaa yeelay marka la soo koobo, tirakoobku wuxuu gacan ka geysan karaa hagaajinta habka loo diyaarinayo waxyaabaha ku jira si loo hagaajiyo khibradda dhirta. Suurtagal maaha in la ogaado qofka isticmaalaha dhinaca kale, kaliya magaalada ay ka yimaadeen iyo habdhaqanka daalacashada ee ay ku lahaayeen -haddii aad tahay turjumaanka Si wanaagsan u hesho in uu ku xiran yahay goobta ka badan waqtiyada 500 waana ogahay in uu ku nool yahay duleedka Peru Lima-. Sidoo kale -waqtiga firaaqada- Eegida dhaqanka isticmaalayaasha soo galaya ee u dhexeeya bogagga sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta isku xirnaanta, maxaa yeelay qof kasta oo qoray waa ogyahay waxa maqaalka ka jawaabaya sababta imaatinka, markaa gelitaanka ayaa wax laga beddelay isagoo ka tagaya xiriiriye boggaas ama cusboonaysiinta a Waxyaabaha la yaqaan ayaa isbeddelay waqti ka dib ama mawduuca uu ahaa mid ku meel gaar ah.
Lixdii biloodba mar ayaa la tirtiraa xogta, taas oo ku xidhan koontada aad ku leedahay Woopra. Marka xogtu maahan mid waari doonta, lamana tirsanayo lambarada isticmaaleyaasha ee isbedelaya markasta oo kaydinta biraawsarka la nadiifiyo ama qaab aan qarsoodi ahayn la isticmaalo.
Qalab kale oo aan leeyahay, waa digniinta goobta goobta dhacday, waxay igu kacday inaan sameeyo laakiin tan iyo sanadka laba jeer ayaa dhacay Waxaan bartay inaan ogaado si aan u galo ugana hor tago dhicitaanka. Waxay ku dhowdahay inay igu dhacdo aniga dhawr toddobaad ka hor, isla sababtaa awgeed, inaan ku adkaysto shaxanka aan ku dhammayn doono gebi ahaanba iska tuurista. Habka lagu ogaan karo ayaa ah in dadka isticmaala ay isku dayaan inay isku bog ka furaan wax ka badan seddex jeer wax ka yar hal daqiiqo, haddii taasi dhacdo muddo 10 daqiiqo ah Apache waxay sare u qaadi doontaa heegan iyo Hostgator joojin doonaa goobta tigidh si loo xalliyo dhibaatooyinka. Markii iigu dambaysay ee aan isku dayo la sameeyo cusboonaysiinta shaxanka Arthemia, oo aan kormeeray habdhaqanka Woopra, markii aan filanayey ugu yaraan, saacad ciriiri ah oo ah 4 PM Mexico waqtiga digniintu soo gaadhay ka dibna waan kacay, beddelay shaxanka oo waxaan bartay in dulucda, in kasta oo soo jiidasho leh, haddana laguma dabakhi karo bogagga leh sawirro badan.
In kasta oo lagu dhawaaqay tan iyo bishii Sebtember, illaa hadda waa la soo dejin karaa; Waqtigaan la joogo, si loo tijaabiyo, waxay keenaysaa fudeyd badan xagga maaraynta warbixinnada, in kastoo bilowgii ay fiicnaan laheyd haddii ay sameyso aalado falanqeyn gadaal u wanaagsan, maadaama muhiimaddeeda ugu weyn ay tahay waqtiga dhabta ah, sidaas darteed Google Analytics weli waa loo baahan yahay in kastoo aan weydiimaha maalinlaha ah laakiin isbeddellada toddobaadlaha ah. Waxay ku dhawaaqeen inay dhisayaan nooc loogu talagalay Android, taas oo hubaal sii kordhin doonta baahideeda.
Post Previous" Hore Geobide, ED50 iyo ETRS89 Isu-duwaha Is-beddelka Nidaamka
Post Next Fur Planet, 77 Bog si aad Maskaxdaada u BedeshoNext »
2 Jawaab ah "Woopra halkan ayaa loogu talagalay iPad"
Boorashka maskaxda ayaa la saxay khatarta loo baahan yahay.
Akhrinta faalladaada: «... dabcan maahan inuu yahay turjubaanka eGeomate ee ku xiran barta in kabadan 500 jeer waana ogahay mar hore inay ku nooshahay daafaha Peru ...» Waxaan uga jawaabayaa 🙂 waxaana jeclaan lahaa inaan ku daro intaas:
Kuma noolahay duleedka Peru (sideen ku noolaan karay?), Waxaa laga yaabaa inaad ula jeedday bannaanka "Square Lima"; Waan ka xumahay in aan halkan ka sii sharraxdo, laakiin waxaan ku noolahay Lima, waxaan ku noolahay Lima oo ku taal Peru, sidoo kale, dabcan 😉.
Salaan ka soo Peru, saaxiib